Kulan dhexmaraya duqa magaalada Falköping iyo wasiirka Socdaalka oo ku saabsan arimaha Soomaalida | Somaliska
Kulan dhexmaraya duqa magaalada Falköping iyo wasiirka Socdaalka oo ku saabsan arimaha Soomaalida
Isbuucaan ayaa waxaa kulan yeelanaya wasiirka Socdaalka Sweden Tobias Billström iyo labo gudoomiye oo ka socda magaalooyinka Falköping iyo Borlänge. Kulankaas ayaa looga hadli doona sidii loo dardar galin lahaa mideynta reeraha Soomaalida.
Ka hor kulanka uu la yeelanayo wasiirka Socdaalka ayaa duqqa magaalada Falköping Ulf Eriksson waxa uu kulan la qaatay jaaliyada Soomaalida Falköping kuwaasoo u gudbiyay qodobo dhowr ah oo ku saabsan mideynta reeraha Soomaalida. Qodobadaas ayuu isagana u bandhigi doonaa Wasiirka Socdaalka. Waxa ka mid ahaa qodobadii loo bandhigay duqqa magaalada.
In caruurta da’ooda ay gaartay 18 sano iyaga oo dacwadu u socoto aan lagu xayirin waqtiga dheer ee la sameynayo isbedelka balse isla hadaba lala mideeyo reerahooda.
Caruurta uu ka maqanyahay mid ka mid ah waalidkood sidaa darteedna aysan macquul ahayn in la keeno ogolaanshaha midka kale, oo uusan ku filneyn dheecaanka DNA. Waa in la dhowraa xuquuqda caruurtaas.
Sidee ayaa loola tacaalayaa kiisaska hada iyo mustaqbalka marka sharciga la badalo. Dad badan ayaa kiisaskooda horey go’aano looga gaaray oo xitaa ay go’aamisay maxkamada sare. Dadkaas waxaa ka baxay lacag iyo waqti badan isla markaana ma haboona in hada ka dib ay ka soo bilaabaan safaarada. Dadkaas kiisaska kooda waa in dib loo eegaa.
ilaa hada lama cadeyn in heshiiska ay ku jiraan caruurta aan la socon waalidkii dhalay, wadanka Soomaaliya waxaa ka jira caruur badan oo la soo korsaday.
Laanta socdaalku waxay siyaadisay dalabkeeda ku aadan matalaada caruurta maadama caruurtu aysan iskood codsi u xareysan karin, taas xitaa waxaa ku jira caruurta ay u dacwoonayaan waalidkii dhalay. Arintaas waxay u baahantahay xal rasmi ah.
Heshiiska waa in sidoo kale lagu daraa dadka isqaba, qaasatan kuwa isguursaday ka dib markii uu midkood Sweden iska dhiibay.
Laanta Socdaalka waa in la siiyaa khayraad dheeri ah si loo dardar galiyo xalinta arimahaan. Ugu dambeyntiina waa in arintaan aan lala sugin ilaa July 2012 ee hada hawsheeda la fuliyaa.
Aqoon isweydaarsi ka dhacay Gävle
Sidee Adam Ali xirfad uga samaystay Sweden?
asc walal wan kusalamay marka horo waxan kuway diina su aal anigu waxan jiraa 15 sano
waxan kunoolahay magalada stockholm marka waxan rabaa in aan dacwo ufuro waalidkeyga marki lafuro dacwada waxa leysku keenayo maan kujiraa markaas mise
abd ismail says:
walaahi ma xuma lakin waxaa shaki ku jiraa arinta ku saabsan sharci badalaada waa muhiim in aanu u fikrno sida saxda ah maxa ayeelay waxaynu nahay dad cagli leh sidee baan ugu fikirnaa sharci aan la badalin wili somaalidu waxa ay dhahdaa. canjeero see u kala koreeso aa loo kala qaadaa.marka hore waa in aan sugnaa inta lga badalayo sharciga then ayaan arki doona cidii la ogalaado wabilaahi tawfiiq mahadsanidiin somalika
November 14, 2011 at 13:19
asc walaalayaal waxaaan leeyahay qolooyinkaan deg degta ay ku jirto xoogaa is dejiya waxaan waa howl daladeed waxey ubaahantahay waqti dheer in wax la badalo iyo in qodobo cusub oo hor leh la keeno waxey u baahantahay waqti marka insha allah haddii dowladda ay qabsatay july waa lagaaraa waayo waxaan soo joogay inaga oo aan wax bala qaad ah ka heusan arimaha familada marka waxaan leeyahay hala sabro oo hala sugo mahadsanidin
WIIL YARI OO XANAQSAN!!!! says:
ilehey waxaan ka baryeynaa waxii qeer ah ha inoo sahlo somaiyoo dhan wey dhibtotay ee alah ka saaro dhibka amiin amiin ,
November 14, 2011 at 21:03
arintaan waad kala hadasheen sidaan jecleen laakiin maxaa la idinkugu jawaabey ?????
huseen fagersta sweden says:
asc dhaman wadsalaman tihin somaliyey aduunka melkastad kajogtaan salan kadib aniga waxandhilaha waqtiga dowlada ayqabsatay madhera aniska sugno ensha alah wayiska hagageysa tankala lkn waxaan rajeynaya kahorba inuu ilahay waxkafiican qalbigoda kusorido waxan ulajedamudada aykaso hormariyan asc
naxariista ilaaheey lagama quusto insha alaahu waad heleeysiin waxaad jaceshihiin wax kastyaa waxeey ku jirtaa gacanta ilaaheey deeqo waalaalahaa kheer usheeg haniyad jabin wabilaahi toowfiiq
asc marka hore dhaman waa idin salaamay walaalaheyga musliminta ohoo sabra waxa daaho ayee qerka ku jiran wax walbo waxee u baahan yihiin sawar wax alah nooqoro magafayno hadee qorantahay inaa tagno sweden waa tageynaa insha alah marba yaana laga quusan baryada eebe wabilaahi towfiq